झापा र पुलिसको सेमिफाइनल भिडन्त आज – Khel Dainik
झापा र पुलिसको सेमिफाइनल भिडन्त आज
सर्लाही (खेलदैनिक) । प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण लालबन्दी गोल्डकप नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो सेमिफाइनलमा आज रमपम झापा–११ र नेपाल पुलिस क्लब भिड्दै छन् ।
जारी प्रतियोगितामा दुवै टोली बाई पाएर सोझै क्वाटरफाइनलमा थिए । झापाले क्वाटरफाइनलमा जावलाखेल युथ क्लबलाई पराजित गरेको थियो भने पुलिसले गोर्खा ब्वाईज, रुपन्देहीलाई हराएको थियो ।
लालबन्दी–६, सर्लाहीस्थित राधाकृष्ण खेलमैदानमा ४ बजेदेखि हुने आजको पहिलो सेमिफाइनल भिडन्त पनि कडा प्रतिस्पर्धात्मक हुने अनुमान छ । भर्खर सम्पन्न नुवाकोट गोल्डकपको उपाधि जितेको पुलिस लगातार दोस्रो उपाधि जित्ने अभियानमा छ ।
उता पछिल्ला केही सिजनबाट खराब लयमा रहेको झापाले आज पुलिसलाई हराउँदै आफ्नो गुमेको लय समाउने प्रयास गर्नेछ । युवा र अनुभवी खेलाडीहरु रहेको पुलिस तथा स्थानीय खेलाडीहरुको साथ पाएको झापाबीचको आज हुने सेमिफाइनल भिडन्त रोचक पनि हुने विश्वास गरिएको छ ।
कति होला त आजको नतिजा ? के पुलिस लगातार दोस्रोपटक फाइनल प्रवेश गर्ला ? वा झापाले पुलिसलाई हराउँदै आफ्नो गुमेको लय भेट्टाउला ? कति होला आजको नतिजा ?
← नेपाली उसु टोली मलेसिया जाने राइजिङ झापालाई प्रथम झापा टि–२० राइजिङ कप क्रिकेटको उपाधि →